४ सय ५० रोपनीमा लटरम्म स्याउ- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ७, २०७६ आश गुरुङ
मनाङ — करिव ४ सय ५० रोपनीमा लटरम्म फलेका स्याउ । लहराजस्तो स्याउका बोट । नेपालमा बिरलै देखिन्छन् यस्ता दृश्य। मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका-१, भ्राताङमा एग्रो मनाङ प्रालिले ७ सय ३५ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायिक स्याउ खेती गरिरहेको छ ।
यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिने स्याउ खेतीको ‘हाइडेन्सिटी’ प्रविधिबाट गरिएको छ । गाला, गोल्डेन र फुजी गरी ३ थरिका स्याउ फलेको छ । स्याउ टिप्नमात्रै १ देखि डेढमहिना समय लाग्छ । यसवर्ष ४ सय मेट्रिक टन बढी स्याउ उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गतवर्ष ३ सय ५० मेट्रिक टन बढी स्याउ उत्पादन भएको थियो । १ सय देखि १ सय ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो स्याउ बिक्री गर्ने तयारी गरिएको छ । यसमा ३ प्रकारका स्याउको दाना हेरी हेरी बिक्री गरिनेछ । औसत १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दामात्रै ५ करोड २० लाख आम्दानी हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङले इटाली र सर्भियाबाट स्याउको बेर्ना ल्याएर स्याउ खेती थालेका हुन् । स्याउ फलाउने र यसको बजारीकरण उनले छोराहरुको जिम्मा लगाएका छन् । एग्रो मनाङको स्याउ काठमाडौं, पोखरा लगायत ठूला–ठूला डिमार्टमेन्ट स्टोर्स तथा होटलमा बिक्री हुन्छ । यसवर्ष कतारमा स्याउ पठाउने तयारी गरिएको छ । एग्रो मनाङको स्याउ ‘हिमालयन फ्रेस’ ब्रान्डबाट बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।
समुद्री सतहदेखि २ हजार ९ सय मिटर उचाईको भ्राताङमा स्याउ फलेको ५ वर्ष भयो । स्याउलाई स्टोर गर्न भ्राताङ, बेंसीसहर र काठमाडौंमा कोल्ड स्टोर्स (चिस्यान केन्द्र) निर्माण गरिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ १७:०३
चोरीका मोटरसाइकलसहित २ पक्राउ
आश्विन ७, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
धनुषा — धनुषा प्रहरीले चोरीका मोटरसाइकलसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा धनौजी गाउँपालिका-१ लखौरीका १९ वर्षीय विनोदकुमार साह र धनदौजी-४का २० वर्षीय चन्दन मण्डल छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१० पुल चोकबाट साहले ज ९ प ६८७१ नम्बर को १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चोरी गरेका थिए ।
यस्तै,मण्डललाई प्रहरीले बहुअर्वाबाट ज ७ प ७०५६ नम्बरको होन्डा साइन मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको थियो । दुवै विरुद्ध चोरी मुद्दा दर्ती गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७६ १६:५८
को हुन् ‘ई’ ? किन बसे सत्याग्रहमा ? [भिडियोे]
कोरोना कहरमा प्रदेश २ [भिडियो]
बाँकेमा दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- ‘बिस्तारै हाँक्नुस् भन्दा चालकले मानेनन्’